के मलेसियाली विमान फ्लाइट ३७० लाई पाइलटले जानिबुझी दुर्घटना गराएका थिए ? | Ratopati
के मलेसियाली विमान फ्लाइट ३७० लाई पाइलटले जानिबुझी दुर्घटना गराएका थिए ?
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २, २०७५ chat_bubble_outline0
काठमाडौं–चार वर्षदेखि हराइरहेको दुई सय जना सवार मलेसियाली विमान नियतवस हिन्द महासागरमा दुर्घटना गराइएको वायु विज्ञहरुले बताएका छन् ।
मलेशियाली वायुयान विमान ३७० अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तर अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुको एक समूहले आइबार राती ‘सिक्स्टी मिनेट अष्ट्रेलिया’ कायक्रर्ममा आएर रहस्यात्मक तरिकाले हराइरहेको विमान खासमा आम हत्या–आत्महत्या भएको तर्क अघि सारे ।
क्यानेडेली विमान दुर्घटना अनुसन्धानकर्ता ल्यारी भ्यान्सले भने “क्याप्टेन जहारी अहमद शाहले जानीबुझी त्यस्तो निर्णय गरेका थिए ।”
“उनले आत्महत्या गर्दै थिए तर दुभाग्यवस उनले प्लेनमा सबार सबैलाई मारे । र, उनले यो जानीबुझी गरेका थिए ।” भ्यान्सले भने ।
बोइङ्ग ७७७ का विमान चालक र विमान प्रशिक्षक समेत रहेका सिमोन हार्डीले सैन्य राडारको प्रयोग गरेर एमएच३७० को उडान योजना तयार पारेर क्याप्टनले विमानलाई मलेशिया र थाइल्याण्डको हवाईक्षेत्र भित्र र बाहिर गरेर अवलोकनकर्ताहरुलाई भ्रममा पार्न खोजेको बताए ।
‘यसले काम ग¥यो किन भने हामीलाई थाहा छ कि सेना अघि आएर विमानलाई हस्तक्षेप गरेन” हार्डीले भने ।
थप दुई विज्ञले अष्ट्रेलिया यातायात सुरक्षा ब्युरोले भनेको विमान पाइलटले नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरि एक्कासी झरेको भन्ने भनाईमा असमती जनाए ।
“मलाई लाग्छ अन्तिमसम्म कसैले विमान नियन्त्रण गरिरहेको थियो ।” हार्डीले भने ।
क्याप्टेन शाहको परिवारले सीबीएस न्युज च्यानलसँग बाल्दै भने “उ प्रति औंला तेर्साएर उनीहरु विज्ञ अनुसन्धानकर्ता भएको प्रमाणीत हुदैन –त्यसको लागि विमान पत्ता लगाउनु प¥यो ।”
इट ३७० २०१४ मार्च ८ मा २३९ यात्रुहरु सहित उडेको थियो । हराएको यो विमान पत्ता चार बर्षसम्म पत्ता लागेको छैन । यसलाई पछिल्लो हवाई इतिहासको सबैभन्दा रहस्यमय घटना मानिएको छ ।
आईपीएलः कोलकत्ताको रोमाञ्चक जित